Ilwareed.com » Waa Maxay Kombuyuutarka Uurka (Ultrasound)?hadaba iska baro
Waa Maxay Kombuyuutarka Uurka (Ultrasound)?hadaba iska baro
November 13, 2012 - Written by ilwareed - Edited byilwareed Ultrasound waa baaritaan isticmaala mowjado dhawaaq si loo eego ilmahaaga, ilmo galeenka iyo mandheerta. Waxaad awoodi doontaa in aad maqasho garaaca wadnaha ilmahaaga isla markaana sawirro ayaa lagu arki doonaa shaashadda.
Inkastoo ilmahaaga laga yaabo in la arko in wiil iyo gabar yahay, ultrasounds looma sameeyo in lagu ogaado jinsiga ilmuhu uu yahay. Waxaa lagu weydiin doonaa.
Si aad isu diyaarisid:
• Shaqaaluhu waxay kaala hadli doonaan wax ku saabsan sawirrada